Blood Donation | KMD
KMD မိသားစု ၏ (၁ဝ) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် ကို 7. December .2018 တွင် အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ တွင် စာရင်းပေး ဝန်ထမ်း (၁ဝ၁) ဦး ထဲမှ ဝန်ထမ်း (၇၇) ဦး သွေးလှူဒါန်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် အရ 1st time တွင် (၅၃) ဦး၊ 2nd time တွင် (၆၈) ဦး၊ 3rd time တွင် (၇၁) ဦး၊ 4th time တွင် (၇၃) ဦး၊ 5th time တွင် (၈၁) ဦး၊ 6th time တွင် (၅၄) ဦး၊ 7th time တွင် ( ၉ဝ) ဦး ၊ 8th time တွင် ( ၇၁) ဦး 9th time တွင် ( 77) ဦး ၊ 10th time တွင် ( 77) ဦး လှူ ဒါန်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။
KMD မိသားစု ၏ (၈) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် ကို 6. April.2018 တွင် အောင်မြင်စွာပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ တွင် သွေးလှူ ရန် စာရင်းပေး ဝန်ထမ်း (၁၁၁) ဦး ထဲမှ ဝန်ထမ်း (၇၁) ဦး သွေးလှူဒါန်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် အရ 1st time တွင် (၅၃) ဦး၊ 2nd time တွင် (၆၈) ဦး၊ 3rd time တွင် (၇၁) ဦး၊ 4th time တွင် (၇၃) ဦး၊ 5th time တွင် (၈၁) ဦး၊ 6th time တွင် (၅၄) ဦး၊ 7th time တွင် ( ၉ဝ) ဦး နှင့် 8th time တွင် (၇၁)ဦး လှူ ဒါန်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (December)2017
KMD မိသားစု ၏ (၇) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် ကို 7. December.2017 တွင် အောင်မြင်စွာပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ တွင် စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း (၉ဝ) ဦး သွေးလှူဒါန်း ပါသည်။ စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် အရ 1st time တွင် (၅၃) ဦး၊ 2nd time တွင် (၆၈) ဦး၊ 3rd time တွင် (၇၁) ဦး၊ 4th time တွင် (၇၃) ဦး၊ 5th time တွင် (၈၁) ဦး၊ 6th time တွင် (၅၄) ဦး၊ 7th time တွင် ( ၉ဝ) ဦး လှူ ဒါန်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (August)2017
KMD မိသားစု ၏ (၆) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူ ခြင်း အစီအစဉ် ကို 8.August.2017 တွင် အောင်မြင်စွာပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ တွင် စုစုပေါင်း (၅၄) ဦး သွေးလှူဒါန်း ပါသည်။ ပထမ အကြိမ် တွင် (၅၃) ဦး၊ ဒုတိယ အကြိမ် တွင် (၆၈) ဦး၊ တတိယ အကြိမ် တွင် (၇၁) ဦး၊ စတုထ္ထ အကြိမ် တွင် (၇၃) ဦး၊ ပဉ္စမ အကြိမ် တွင် (၈၁) ဦး၊ ဆဋ္ဌမ အကြိမ် တွင် (၅၄) ဦး၊ လှူ ဒါန်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (April)2017
04.04.2017 နေ့တွင် KMD Group of Campanies မှ ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်အေး(President) ဦးဆောင်၍ ဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီး (၅)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားသွေးလှူဘဏ်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း (၈၁) ဦးစုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (December)2016
05.12.2016 နေ့တွင် KMD Group of Campanies မှ ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်အေး(President) ဦးဆောင်၍ ဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီး စတုတ္ထကြိမ်မြောက် အမျိုးသားသွေးလှူဘဏ်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း (၇၃) ဦးစုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (August)2016
03.08.2016 နေ့တွင် KMD Group of Campanies မှ ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်အေး(President) ဦးဆောင်၍ ဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီး တတိယအကြိမ်မြောက် အမျိုးသားသွေးလှူဘဏ်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း (၇၁) ဦးစုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
KMD_မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (March)2016
14.03.2016 ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားသွေးဌာနတွင်KMD Group of Companies မှ ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်အေး (President)ဦးဆောင်၍ ဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီး ဒုတိယ အကြိမ်သွေးလှူဒါန်းခဲ့ရာ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း(၈၄)ဦးပါ ဝင်ခဲ့ပါသည်။
KMD မိသားစု စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ (Nov)2015
နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ တွင် အမျိုးသားသွေးဌာနတွင် KMD Group of Companies မှ ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်အေး (President) ဦးဆောင်၍ ဝန်ထမ်းများ စုပေါင်းပြီး ပထမအကြိမ်သွေးလှူဒါန်းခဲ့ရာ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း (၈ဝ)ဦးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။